Qaabka Ugu wanaagsan ee ilmaha loo seexiyo? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Abshiro Axmed Cabdi — August 26, 2019
Hooyo kastaa waxay soo marta mudado ay ku xanuunsaneyso ku dhibtooneyso hurdada cunga.gaar ahaan hadii ay tahay cunuggeeda koowaad, maadama aysan ogeyn goorta cunuggu rabo inuu seexdo iyo goorta uu soo kacayo.
Qaabka ilmuhu u seexdo:
Jiifka ilmaha In kasta oo muhiimad gaara ah leedahay ogaanshaha dariiqa saxda ah ee loo seexiyo cuniga.
Akademiyada Mareykanka ee Dhallaanka ayaa diidey ilmaha u seexdo caloosha, sababtuna tahay waxaa suurto gal ah inuu ilmuhu joojiyo neefsashada inta laguda jiro hurdada. Saacadaha uu soo kacaya, cunugga waxaa lagu fidin karaa calooshiisa muddo gaaban waana in waalidiinta la kormeeraa wakhtigaas.
Hooyooyinka qaarkood ayaa laga yaabaa inay u maleeyaan inay jiifka dhabarka uu yahay mid u wanaagsan uguna nabdoon meelaha cuniga loo seexasho.
Qaabkan ayaa ilmaha ka caawiya inuu si fiican u neefsado si dabiici ah, halisna uma ahan neefsashada. Lakin haddii ilmuhu matago caano badan kadib markuu dhargo, caanuhu waxay ku soo noqon karaan afka iyo marinka neefsashada, taas oo keenta in ay ku xiranto neefta. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in cuniga loo seexin dhabar dhabar markuu dharagsanyahay. Maxaa yeelay caanihii ayaa dib usoo laaban karaan taasi oo cuniga noolashiisa qatar galineyso.
Jiifka dhinac dhinaca: Inta badan dhakhaatiirta caruurta waxay kula taliyaan hooyooyinka inay u oggolaadaan ilmaha inuu dhinac dhinac u seexdo. taasoo u oggolaaneysa ilmaha inuu si xor ah u neefsado oo ay yaraato khatarta ah in neefsashada ay sabab u tahay dhimashada cuniga. Barkin yar oo ilmaha gadaashiisa ah ayaa ka caawinayso inuu jiifka dhinac dhinaca, si uu san dhabar dhabar u jiifan. Sidoo kale waa in laga fageeyo maryaha si uu san iskugu duubin.
Tags: Qaabka Ugu wanaagsan ee ilaha loo seexiyo?
Next post Caafimaadka Bulshada
Previous post Cuntooyinka Lasiiyo Ilmaha 6 bilood jirka ah?